Kutheni ufuna ezimbini Isondo Self Ukulinganisela Electric Isithuthuthu - Jomo Technology Co., Ltd
Kukho amanye Ulobumba ngakunye lowo iingxaki kunye nenkqubo ibhetri kunye nebhodi ngaphakathi kokuba agxothwe. Ibhodi kwakhona bazilungiselela kunye abenzi uhlobo ephendulayo kukulandela, apho uthe shift ubunzima yakho. Xa akhwele Swagtron, 1st unyawo inyathelo ngexesha ngasemva. Ukuba kwenzeka ukuba ndayame umva, step umva. Nangona uninzi ngezithuthuthu self balancing okunyamezela ngezantya ngokugqithisileyo, iindawo zokumisa ngesiquphe yaye ukutshaja ixesha elide, kuba ukuthambekela abangayi kuyinyamezela ubunzima enzima ubude ende yexesha. Oku kungakwenza lula bhasi iqashiso lakho. I Roto-band (okanye Koowheel uphawu ) ibhodi kungaba lula kakhulu uhambo yaye uvakalelwa njalo ikhuseleke kakhulu xa kuthelekiswa nabanye, ikakhulu ngenxa yokuba kukukhawuleziswa kulula kakhulu, ngoko loo nto ngokwenene uvakalelwa ngathi ufuna ukuba uphazamiseke. I brand Uyilo olutsha ibhodi Koowheel kwakufuneka aye ngokusebenzisa iindidi zeetshekhi ukufumana isatifikethi ul 2272.
Xa kufika ixesha ukuze ukwazi ukufumana phandle izinto kuthwalelwa phandle, kwaye kufuneka ukuba ubonise iintloko ngelixa uyenza, i Koowheel One patent ngaphandle kwendlela 8.5inch amavili big hoverboard ivili ezimbini K7 uya kwenza umsebenzi kuwe. Swagway lo mbuzo wegolide yoshishino hoverboard i kwimeko kumajelo eendaba. Ihlabathi becala isigqibo sokuba igama i hoverboard. Yazi ngokuphathelele iimpawu, izigqibo zoyilo, specs, iinketho extra zonke wathetha hoverboards enye kwenye yaye ingcamango oko hoverboard ezilungele ngokweemfuno zakho ipokotho. Ngokuba bonke-terrain uhambo, uya kucela hoverboard namavili ezinkulu. Kwiintsuku nje ezimbalwa imizuzu nizigcine, uya uzive ngathi pro ukuba Sekudlule Scootin 'iminyaka. IBhodi Koowheel zezibonelelo ngokwalo njengendlela hoverboard, kodwa ngokuqinisekileyo kubonakala ukuba ufane njenge Rubber. Ku nga ha va nemoto engayiwayo, ukuba ngathi Rubber kunye isithuthuthu gqith ukuba amngcatshe uvuyo nabani ekhwela kuyo. Emva kokufunda wethu Self Ukulinganisela Isithuthuthu hoverboard 2 ivili Easy Siphethe 6.5 intshi yerabha Tyres Solid LED Izibane K8, wena Siyifumene khetho ukwenza ukhetho. Siyathemba ukuba ukuhlolwa zethu luncedo kuwe ukuze wenze ngokuthenga kulwazi.
Xa amandla sishintshe ngokulula ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle and vice versa, ukuba ngogqibeleleyo ukuze isetyenziswe kwidyunivesi lezifundo, kwimisitho zomculo, kunye kakhulu ngakumbi. Okuvuyisayo kukuba, uninzi, ukuba asingabo bonke, self-balancing abarhwebi scooter kwimarike unayo kuyo nantoni na sihlandlo waqinisekisa ukuba izinto zabo aziyi kuba ziinkathazo abantu ukuba basebenzise. Emva nigweba umzimba yokuma isikhundla kunye ngqo gyroscope ozinzileyo eyakhelwe-ngaphakathi, le ezimotweni ingqondo yedijithali isebenza ngaphandle izalathiso ezichanekileyo nge elukhuni kwaye kakhulu-isantya engundoqo isilawuli, ibhetri ziliqhubela imoto ukuba ezicuthiweyo imoto. Ukongezelela, i bar idolo zinoboya yayenzelwe ukwandisa indlela yokuphatha uyakuthi indlela apho ukuba sixhobo ajika, nto leyo eyenza kube lula kuwe enkosi ngendlela elilawulayo. It Ngaphezu sibonisa amavili aluminium hub umgangatho ophezulu kunye amavili irabha xa ekhwela lula.